Yaa loo doortay xiddiga garoonka kulankii Belgium ay garaacday Japan? – Gool FM
Yaa loo doortay xiddiga garoonka kulankii Belgium ay garaacday Japan?
(Moscow) 02 Luulyo 2018 Xulka qaranka Belgium ayaa u gudbay wareega 4-dhamaadka koobka adduunka kadib guul ay ka gaareen xulka xulka qaranka Japan.
Xidigaha Jan Vertonghen, Marouane Fellaini iyo Nacer Chadli ayaa guul muhiim ah ku hogaamiyay xulka qaranka Belgium, waxayna nasii u yeesheen inay iska xaadiriyaan wareega xiga ee koobka aduunka 2018.
FIFA ayaa u dooratay Eden Hazard laacibkii ugu fiicnaa ciyaarta kadib markii uu xulkiisa Belgium si fiican ugu ciyaaray khadka dhexe, xili sidoo kale uu caawiyay goolka 2-aad uu dhaliyay Marouane Fellaini, kaasoo uu ku dhaliyay dhanka madaxa.
Xulka qaranka Belgium ayaa wareega 4-ta kula ciyaari doona dhigiisa Brazil, waxayna is arki doonaan maalinta Axada ee soo aadan.
“Wax badan ayay hadleen, laakiin waxaa la gaaray xiliga ay guryahooda ku laaban lahaayeen”.. Neymar oo weerar ku qaaday xulka Mexico